Kapoaka mesure d’unité dans le commerce au quotidien à réformer? il y a 12 heures
Benirina il y a 4 années
Marolahy Dominique il y a 4 années
"Namelona ireo zana-piangonana natoritory ny taonan’ny Famindrampo"
Nangonin'i JRR il y a 5 années
Tafatafa nifanaovana tamin’i Monsenera Rosario Vela misahana ny diosezin’Ambanja no entina amintsika eto. Sarotra no nahazo azy. Vao avy nanao fitsidihana tany Anahidrano ny alarobia voalohan’ny volana jona. Nametraka ny entana dia nitarika ny lamesa ho an’ny tanora io hariva io. Ny alakamisy maraina dia nitarika ny fivorian’ireo mpiandraikitra ny petit séminaire eo amin’ny Arisidiosezy Avaratra. Ao anelanelan’izany rehetra izany sy ny tsy voatanisa no nifampiresahana.